डल्लीको ‘डायरी’ ट्रेलरलाई तीन दिनमा कतिले हेरे ? « Mazzako Online
डल्लीको ‘डायरी’ ट्रेलरलाई तीन दिनमा कतिले हेरे ?
डल्ली उर्फ अभिनेत्री छुल्ठिम गुरुङले निर्माण गरेको फिल्म ‘डायरी’ को ट्रेलरलाई रिलिजको तीन दिनमा तीन लाख बढीले हेरेका छन् । बिहिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको ‘डायरी’ को ट्रेलरलाई झण्डै तीन लाख साठ्ठी हजारले हेरेका छन् । ट्रेलर यस्तो बनेको छ :
अलिन योञ्जनको निर्देशन रहेको फिल्म ‘डायरी’ को ट्रेलरलाई युट्युव भ्युअर्सले रुचाएका पनि छन् । तेह्र सय बढी लाइकमा ६५ मात्रै डिसलाइक छन् । तीन सय बढी कमेन्ट्समा मन परेको भन्ने धेरै छन् । रेखा थापाको भिलेन रुप, नव नायक सन्नी सिंहको एक्सन र नायिका छुल्ठिमको क्युटनेसलाई धेरैले मन पराएका छन् ।
रिभेञ्ज लभ स्टोरी फिल्ममा रेखा, छुल्ठिम र सन्नी मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । झण्डै दुई दशकको फिल्मी करिअरमा रेखा पहिलो पटक भिलेन अवतारमा प्रस्तुत भएकी छिन् । निर्देशक योञ्जन र छुल्ठिमले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेको ‘डायरी’ जेठ ५ गतेदेखि अल नेपाल रिलिज हुँदैछ ।